Xidiga Garoonka iyo Xaqiiqooyinka laga Diiwaangaliyay guud-daradii Manchester United kasoo gaartay Wolves | laacibfm.com
Home Laacib Xidiga Garoonka iyo Xaqiiqooyinka laga Diiwaangaliyay guud-daradii Manchester United kasoo gaartay Wolves
Xidiga Garoonka iyo Xaqiiqooyinka laga Diiwaangaliyay guud-daradii Manchester United kasoo gaartay Wolves
Gool soo daahay oo Joao Moutinho ka dhaliyay Manchester United ayaa Wolves ka caawiyay inay 1-0 kaga badisay kulan ka tirsan Premier League.
Cristiano Ronaldo oo ahaa kabtanka kooxda ee kulankan iyo Edinson Cavani ayaan wax saamayn ah ku lahayn ciyaarta oo ay inteeda badan maamulanaysay Wolves, taas oo birta garaacday, isla markaana halis badan ku haysay goolhaye David De Gea.
Xidiga Garoonka Daniel Podence
Xaqiiqooyinka laga diiwaangaliyay kulankan
Manchester United ayaa ku guul-darraysatay inay wax goolal ah ka dhaliso afar ciyaarood oo oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan oo ay ku ciyaartay garoonkeeda Old Trafford. Waxay mar horeba dhaafeen xilligoodii ugu adkaa ee ay abaar dhinaca goolasha ahi ku dhacdo oo ahayd xilli ciyaareedkii hore ee 2020-21 oo saddex ciyaarood oo kala duwan aanay garoonkooda goolal ku dhalin. Waligeed kuma dhicin in afar ciyaarood aanay goolal ku dhalin qalcaddeeda riyad.
Manchester United waxay guul-darraysatay ciyaartii koowaad ee sannadka cusub markii labaad muddo saddex sannadood gudahood ah. 23kii sannadood eeka horreeyey sidan oo kale kuma aanay dhicin.
Goolka uu dhaliyey Joao Moutinho ayaa noqday midkii afraad ee waqtigan oo kale uu ka dhaliyo horyaalka Premier League, kaas oo uu ugu dabbaal-degay curashada sannadka cusub. Dhamaan afartiisa gool waxa uu ka toogtay bannaanka xerda ganaaxa. Kala-badh goolashaas waxa uu ka dhaliyey Manchester United.
Previous articleManchester United 0-1 Wolves: Red Devils oo lagu garaacay Garoonkeeda Moutinho oo Shabaqa soo taabtay
Next articleWararka Suuqa Ciyaaraha Caawa: Mauro Icardi, Luis Suarez,Victor Nelsson, Sanches, Gareth Bale, Isco
Youri Tielemans oo qarka u saaran inuu wadahadalo la yeesho Arsenal...
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester City Youri Tielemans ayaa qarka u saaran inuu wadahadalo dheeri ah la yeesho Arsenal usbuucan. Belgian-ka ayaa qandaraaska uu...
Thomas Tuchel oo ka xanaaqsan kana Hadlay ‘isbeddelka habdhaqanka ee Xidigaha...
Lionel Messi oo ku soo laabtay tababarka buuxa ee kooxda Paris...
Liverpool oo ku dhow inay 63 milyan ginni kula soo wareegto...
Bruno Guimaraes oo Xaqiijiyay Xiriir uu ka helay Kooxda Arsenal